Maqaal Muhiim ah-Shaqa La’aanta Haysata Dhalinyarada Soomaaliyeed.
July 21, 2017 - Written by Kulmiye
Dawladda: Waxaa si gaar ah uga saan xil inay yareyso shaqo la’aanta isla markaana la timaado siyaasado wax ku ool ah oo lagula tacaalo shaqo yarida. Si gaar waxaa lagula talinayaa:
Hay’adaha kala duwan ee dawlada sida xukuumada iyo baarlamaanka labada gole waa inay si deg deg u soo saaraan sharciyada iyo siyaasadaha dhiiri geliya maalgashiga dalka hadii uu horey u jireyna la dhaqangeliyo. Si gaar ah waa in la soo saaraa siyaasado lagu dhiiri gelinayo in dhalinyarada ay dalkooda ka shaqeystaan.
Sidoo kale dawladda waa inay meel marisaa siyaasadda shaqo qorista ee dalka si guud ahaan loo shaqeeyaha uu u helo nidaam daahfurin oo lagula xisaabtamo marka uu shaqaale qoranayo.
Xukuumadda waa inay dardar gelisaa dhisidda guddiga la dagaalan musuqmaasuq si ay u dhamaato eex, wax is daba marin iyo reer hebel.
Maalgelinta iyo nidaaminta waxbarashada oo ay xukuumada ku darto muhiimadaha si loo helo adeeg waxbarasho oo tayo leh ayaa ka qayb qaadan karta in hoos loo dhigo shaqo la’aanta dhalinyarada.
Maalgelinta kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka ayaan horseed u noqoneyn oo kaliya in shaqo abuur la helo ee waxay sahleysaa adeegyada guud, dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo isu-socodka dadka.
In dawladda gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ay abuurto Mac-had ay ku xirfad bartaan ardeyda soo qalin jebisey si ay u helaan khibradda shaqo ee uu ku shuruudinayo loo shaqeeyaha.
Dawladda waa inay la timaadaa siyaasado iyo nidaam si gaar ah loogu dhiiri gelinayo ardeyda Soomaaliyeed ee gudaha dalka iyo dibadba wax ku soo bartey laakiin aan sidanin baasaboor ajnabi ah si aaney ciriiri u gelinin ajnabiga iyo qorba joogta.
Sidoo kale dawlad goboleedyada ayaa lagula talinayaa inay qaadaan talaabooyin la mid ah oo horseeda in dhalinyarada ay shaqo helaan isla markaana ay kaga waantoobaan dhiibaatooyinka ayaga loo adeegsado.
Hal-abuur ganacsi iyo isku filnaasho: inta badan dhalinyarada Soomaalida marka ay wax-bartaan waxay aad isugu dhabar jebiyaan inay dad kale u shaqeeyaan taa bedelkeedana aanay ku isku mashquulinin inay la yimaadaan fikrado ganacsi oo ay uga maarmaan inay dad kale u shaqeeyaan. Hadaba dhalinyaro qabriga hala aadina adinkoo maskaxdiina ay fikrado ka buuxaan!
Shaqodoone, ma tahay qofkii loo baahnaa oo ma leedahay xirfado kugu filan oo aad ku shaqeyn karto? Sababta su’aashan ayaa ah in dhalinyaro badan ay ku fikiraan oo keliya inay jaamacada dhameeyaan laakiin aaney lahayd xirfado ama waxyaabo kale oo muhiim u ah goobta shaqada. Ardeyda waxaa lagula talinayaa inay bartaan xirfado gaar oo la xiriirta aqoonta guud oo ay baranayaan weliba inta aaney jaamacadda ka qalin jebinin.
“Geela gal oo Garoor ka keen” ayaa ku qafilan inta badan dhalinyarada soo dhameeyey jaamacadaha. Kol hadii aad cusub tahay oo aad mar dhow soo qalin jebisey islamarkaana loo shaqeeyaha uu kugu xujeynayo dhowr sano oo khibrad shaqo ah waxaad u baahan tahay inaad raadsato “Xirfad shaqo ku bedelasho”, Internship ama inaad si volunteer ah u shaqeyso sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaadan dhakhso u helin shaqo mushaar fiican leh oo u qalanta adiga iyo shahaadada aad wadato.
Loo shaqeeyaha: Loo-shaqeeyaasha oo ay ka mid yihiin dawladda, sharkadaha gaarka loo leeyahay iyo hay’adaha aan dawliga ahayn waxaa lagula talinayaa inay ay isticmaalaan nidaam daahfuran oo fursado isku mid ah siinaya dadka shaqo doonayaasha ah si ay ugu fududaato in qof sax ah iyo boos sax isugu aadaan ka dibna tayada shaqada iyo wax soo saarka u wanaagsanaato.
QORE-SENATOR HUSSEIN SHEIKH MOHAMUD